प्रदेश सरकार आफनै स्वामित्वको बैंक स्थापना गर्दै - Janakpur Today
जनकपुरधाम, असार २४ गते। प्रदेश नं. २को सरकारले आफनै स्वामित्वमा प्रदेश विकास बैंक स्थापना गर्ने भएको छ । प्रदेशको समग्र विकासको लागि सरकारकै स्वामित्वमा बैंक स्थापना अपरिहार्य रहेकोले बैंक स्थापनाको गृहकार्य अघि बढाइएको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री विजयकुमार यादवले जनाउनु भएको छ ।
कार्यदलले बैंक स्थापनाको आवश्यकता र औचित्य तथा अवधारणा पत्र तैयार गरेर प्रदेश सरकारलाई बुझाउने जिम्मेवारी पाएका छन । कार्यदलका संयोजक डा. हरिवंश झाले अवधारणा पत्र माथिको छलफल शुरु भै सकेको र सम्भवतः यसै साता अन्तिम रुप पाउने बताउनु भएको छ ।
रौतहटमा विकास निमार्णबारे सार्वजनिक सुनुवाइ